Ciyaar La Isku Daalay Kaddib Xulka Jarmalka Oo Rigooreyaal Ku Reebay Talyaaniga Una Gudbay Afar Dhammaadka Tartanka Koobka Qaramada Yurub | Berberatoday.com
Ciyaar La Isku Daalay Kaddib Xulka Jarmalka Oo Rigooreyaal Ku Reebay Talyaaniga Una Gudbay Afar Dhammaadka Tartanka Koobka Qaramada Yurub
Paris(Berberatoday.com)-Xulka qaranka Jarmalka ayaa ciyaar la isku daalay kaddib rigooreyaal 6-5 uga adkaaday Talyaaniga, waxaana uu sidaas ugu soo baxay afar dhammaadka koobka qaramada Yurub ee ka soconaya Faransiiska.
Labada xul ayaa soo bandhigay kubbad weerar ku dhisan oo fursado halis ah la isku helay labada dhinac qeybta hore, laakiin waxaa lagu kala nastay barbaro goolal la’aan 0-0.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybta labaad ee kulankan ayaa xulka Jarmalku hoggaanka u qabtay ciyaarta, waxaana goolkaas ku hoggaamiyey 65′ daqiiqo Mesut Ozil, kaddib markii uu dhammaystiray kubbad dhinac laga soo baasay oo ku dhacday mid ka mid ah difaacyada Talyaaniga, sidaas ayeyna ciyaartu ku noqotay 1-0 lagu hoggaaminayay xulka Italy.
Xulka qaranka Talyaaniga ayaa iska soo guday goolkaas, waxaana rigoore loo dhigay gool u rogay 78’daqiiqo Leonardo Bonucci, kaddib markii mid ka mid ah xiddigaha Jarmalku uu kubadda gacanta ku taabtay isagoo ku jira xerada ganaaxa ciyaarta ayaana noqotay barbaro 1-1.
Dhowr weerar oo ay isku qaadeen labada dhinac ma suuragalin inay gool dhaliyaan, kulanka ayaana waqtigii caadiga ahaa 90’daqiiqo ku soo dhammaaday barbaro 1-1.
Waxaa loo baahday in la kala saaro labada xul si loo xaqiijiyo kii u gudbi lahaa afar dhammaadka Euro 2016,waxaana ciyaarta lagu kordhiyey 30’daqiiqo oo dheeri ah (Extra-time), intii lagu guda jiray waqtigaasi dheeriga ahaa labada xul midna uma suurto gelin inay gool dhaliyaan kulanka ayaana ku soo dhammaaday gar isku mid ah 1-1.
Gool ku laad ama rigooreyaal ayaa loo dhigay inay isku tuuraan labada xul, waxaana inkastoo dhowr gool ku laad la iska qabtay haddana ugu dambayn uu xulka Jarmalku ku badiyey rigooreyaal 6-5, waxaana sidaasi tartanka uga haray xulka Talyaanig.